Ciidamo Milatari ah oo isku hor fadhiya deegaanka Ceel-Cade ee Shabeelaha dhexe. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTACiidamo Milatari ah oo isku hor fadhiya deegaanka Ceel-Cade ee Shabeelaha dhexe.
Ciidamo Milatari ah oo isku hor fadhiya deegaanka Ceel-Cade ee Shabeelaha dhexe.
July 18, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Ciidamo Milatari ah oo isku hor fadhiya deegaanka Ceel-Cade ee Shabeelaha dhexe.
(Warqaat.Com)--Wararka ka imaanaya deegaanka Ceel-cadde ee Gobalka Shabeelaha dhexe ayaa soo sheegaya in Ciidamo ka tirsan Milatariga Soomaaliya ay isku hor fadhiyaan Bar-Kontarool oo ku taala deegaankaasi oo aheyd meel lagu qaado Lacagta Canshuurta Gaadiidka ee HirShabeelle.
Xiisadaan ayaa la sheegay iney timid kadib markii Ciidamo milatari ah ay Shalay galab qabsadeen Xarunta Canshuuraha HirShabeelle ee deegaanka Ceel-cadde islamarkaana ay ka qaatayn lacag ku dhaw 200 oo milyan oo Shalin Soomaali ah wali ay goobta ku sugan yihiin.
Ciidamadaasi ayaa waxaa hogaaminaya Sarkaal ka tirsan Milatariga Soomaaliya oo lagu magacaabo Qoondhe waxaana saakay soo dul-dagay Ciidamo kale oo ka tirsan Milatariga Soomaaliya kuwaas oo ku socda amar ka soo baxay General Koronta Taliyaha Qeybta iyo Maamulka HirShabeelle waxaana hogaaminaya Sarkaal kale oo magaciiisa lagu sheegay Saneey.
Dadka deegaanka, gaar ahaan Gaadiidley ayaa walaac xoog leh ka muujiyay amaankooda maadaama halkaasi ay tahay meel marin Gaadiidka ka baxa Muqdisho ee Gala Shabeelaha dhexe, kuwaas oo ku sii socda Gobalka ama Gobalada kale.
Labad dhinac ee Milatariga Soomaaliya ee isku hor fadhiya deegaanka Ceel-cadde ayaa la sheegay iney wataan Gaadiid dagaal iyo Ciidamo badan waxaana aad looga cabsanayaa in halkaasi ka dhaco dagaal dhaliya dhimasho iyo dhaawac.
684,904 total views, 9,570 views today
684,904 total views, 9,570 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
684,777 total views, 9,569 views today
684,777 total views, 9,569 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
684,810 total views, 9,572 views today
684,810 total views, 9,572 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
684,873 total views, 9,574 views today
684,873 total views, 9,574 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
684,927 total views, 9,569 views today
684,927 total views, 9,569 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]